Ukuphupha kukaMama Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umama ngowona ulungileyo. Umamela kwaye ufunda okuninzi xa, umzekelo, uSuku loMama loNyaka lusondela. Kwiminyaka yokuqala yobomi, yena yeyona mntu ubalulekileyo emntwaneni. Umama uphantse abe lilizwi lokuqala abantwana abanokulibiza. Kwaye kamva, uninzi lwazo lunolwalamano olukhethekileyo kunye noonina.
Ukuba uphupha umama wakho, kusenokwenzeka ukuba khange umbone ixesha elide. Emva koko ephupheni uyaqonda ukuba uyabakhumbula. Mhlawumbi kwabakho umlo, kwaye lo mphuphi uyazisola ngoku. Ukuhlalutya intsingiselo yesimboli yephupha, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kubudlelwane kunye nolwalamano lokwenyani nonina.
1 Uphawu lwephupha «Mama» - Ingcaciso ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Mama» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Mama» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Mama» - Ingcaciso ngokubanzi.
Umama ufuzisela ukutolikwa kwamaphupha. nya mekela. Uyabondla kwaye ubanxibise abantwana bakhe kwaye ubalungiselela el mundo ngokudumisa kunye nokusola. Iphupha ngomama wakho linokubonisa ulwalamano lokwenyani lomntu olala naye, olunokuba yingxaki ngamanye amaxesha.
Rhoqo, nangona kunjalo, uphawu lwephupha lubonisa imeko yangoku yengqondo kunye neemvakalelo zomphuphi ngokwakhe. Ngaba ukhe wathetha nje kancinci mva nje? impilo-ntle yakho ukhathalelwe kakuhle, inani lamaphupha likucela ukuba uzikhathalele ngakumbi. Uhlalutyo oluthembekileyo lwamaphupha, kufuneka uyazi imeko yakho yobomi kunye nobudlelwane bosapho.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, umama uhlala eyiphawu elifanelekileyo lamaphupha. Nangona kunjalo, ephupheni ungenza ifayile ye- isilumkiso Bamele, umzekelo, ukungaphenjelelwa kakhulu ngabanye. Ukuba unamava ukufa kamama wakho, nangona enyanisweni esaphila, eli phupha lixela utshintsho. Ukuba umntu unxibelelana neemvakalelo ezilungileyo kunye nomama ongasekhoyo ephupheni aze amkhumbule, emva koko utshintsho kubomi bephupha luya kuba lolulungileyo.
Ukuba umama ongasekhoyo uvela ephupheni, oku kuyimpawu yobomi obude bephupha ngokokuhlalutya kwephupha. Umxholo ngqo wephupha nawo ubalulekile: ukuba uphuze umama wakho, iphupha lithembisa impumelelo yorhwebo kunye nabantu. Ukuba umama ubize umntu oleleyo, uyeza isilumkiso kulingana ukungalibali owakho umsebenzi. Ukuba uthetha naye, uphawu lwephupha ngokokuchazwa kwephupha luphawu lwempumelelo yeeprojekthi ezibalulekileyo okanye, ngokubanzi, zeendaba ezilungileyo.
Uphawu lwephupha «Mama» - ukutolikwa kwengqondo
Kuhlalutyo lwengqondo lwamaphupha, umama uhlala ebonisa ukulangazelela okungazi nto ukulinganisela ngokweemvakalelo, okunganyanzelekanga ukuba kunxulumene ngqo nomntu wokwenene. Uphawu lwephupha "uMama" lubhekisa kumfazi okanye kuyilo lwezinto zomntu ophuphayo. Ukuba ukhathazekile ngombono wokophula umhlaba omtsha ngokwenyani, umfanekiso wephupha uvela njenge Igosa eligunyazisiweyo kubonakala ukuba uyamkhuthaza kwisicwangciso sakhe.
Njengomama osoyikisayo okanye onzima, inani lamaphupha nalo linokutsalela ingqalelo kubunzima bokungazi obususela ekukhuleni okungathandekiyo ebuntwaneni. Ingakumbi kwimibutho yamva, ifuthe likamama lidlala indima ebalulekileyo. Ukuba iphupha liyindoda, uphawu lwephupha "umama" ludla ngokubonisa ukungakhuli engqondweni kunye Ukuxhomekeka phantsi. Ephupheni, umfazi uye azi ubufazi bakhe nazo zonke izinto ezintle nezingalunganga.
Ngokubanzi, umthetho wokuchazwa kwamaphupha uyasebenza: ngokufuthi uphupha umama wakho, kokukhona uya kuba ulunge ngakumbi. ulwalamano kuye.
Uphawu lwephupha «Mama» - ukutolika kokomoya
Umama umele ukutolika amaphupha okomoya uphawu lokuzala. Uphawu lwephupha «Umama» lithetha amandla okudala kwaye ibonisa ukuba umntu oleleyo ukwinkqubo yokuyila.